DEG DEG : Wararkii ugu Dambeeyay Hotel SYL ee Muqdisho, oo Weerar Noociisu Cusub yahay Caawa lagu qaaday | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Dec 10, 2019 - 4 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Weerar Qorshaysan oo Caawa Fiidkii Ururka Al-Shabaab ay kusoo qaadeen Hotel SYL ee magaalada Muqdisho iyadoo weli ay socoto rasaas laga maqlayo gudaha Hotelka.
Warar ayaa sheegaya in ciidanka Ammaanka ay soo badbaadiyeen In badan oo ka mid ah dadkii ku jiray gudaha Hoteelka oo ku dhow Xarunta Madaxtooyada, Mana Jirto illaa iyo hadda wax khasaare ah oo la xaqiijiyay oo ka dhashay weerarkan, inkastoo rasaas iyo bambooyin la isu adeegsaday.
Ragga hubeysan ee galay gudaha hotelka ayaa ku socday lugta taasoo ah xeelad cusub, iyadoo la ogyahay in Al-shabaab marka ay fulinayaan weeraradan oo kale ay adeegsan jireen gaadiid qaraxyo laga soo buuxiyey oo ay ku furan jireen albaabka hotelka ama dhismaha ay weerarayaan.
Waxaa la xaqiijiyey in ugu yaraan laba ka tirsan xildhibaannada baarlamaanka Soomaaliya ay ku dhaawacmeen weerarka, halka qaar kale iyo dad shacab ah lasoo bad-baadiyey.
ISIS MADE IN ISRAEL(AL-YAHUDIYAH GROUP’s).
Wananka UDIXIYADA ahiba waqti bay leeyihiin , ee tani waa iska QAWRAC !
Qofkaad booqanweyda isagey u banaantahay inuu kusoobooqda ! Alshabaab way kasoobaxeen balantoodi !
Isbahaysiga dawladdiidka waa laga adkaandoonaa.
Xoogaga wadaniyiinta Somaliyeed ayay guushu raacidoontaa.
War magaca DAWLAD yaynaan meel kaga dhicine horta marka hore Dawlad nimada hala XAAL mariyo.
Alahabaab + Dawlad = Isla Alshabaab